Blogger of this week: Yadav Humagain - MeroReport
Blogger of this week: Yadav Humagain
काभ्रेपलान्चोकका यादव हुमागाइ हाल संगमचोक काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन । पत्रकारितामा स्नातक गरेका यादव बिगत ५ बर्ष देखी पत्रकारितामा कृयाशिल रहेका छन । आमसंचारको विद्यार्थी यादव अध्ययन, भ्रमण गर्न रुचाँउछन । सिनियर पत्रकारका व्लगहरु पढेर ब्लगिङ गर्न सिकेका यादवले अग्रज र साथीहरुको प्रतिक्रिया पाउन थालेपछि नियमित ब्लगिङ गर्न थाले । अध्ययन र भ्रमण गर्न रुचाउने यादव यस हप्ता मेरोरिपोर्ट साताको ब्लगर बन्न सफल भएका छन । सदा झैं यसपटक पनि हामीले उनीसँग केही कुराकानी गरेका छौं :
आफ्नो ब्लगिङको इतिहास बताइदिनुस न ? तपाईं कसरी ब्लगिङमा आकर्षित हुनु भयो ? कहिले देखि ब्लगिङ सुरु गर्नु भयो ?
आमसंचारको विद्यार्थी भएकाले यस विधाप्रति स्वत रुची बढ्ने भैहाल्यो । राजाको निरंकुश शासनकालमा आमसंचार माध्यममा सरकारले नियन्त्रण गरेपछि ब्लगको भूमिका र महत्व सुनेर म यसतर्फ आकर्षित भए । पछि संचारमाध्यममा काम गर्न थालेपछि आफ्ना समाचार र आफ्ना बिचार प्रकाशित गर्न ब्लग नै एक उपयुक्त माध्यम बन्यो । पत्रिकामा स्थान अभाव भए, धेरै सम्पादन भएपनि आफुले लेखेका कुरा ब्लगमार्फत दिन सकिन्छ । मैले ब्लगिङ थालेको ५ वर्षभन्दा बढी भयो । जनसम्पर्क बढाउन समेत धेरै सहयोग भएको छ ।
सुरुमा ब्लगिङको कस्तो अनुभव भयो ?
सिनियर पत्रकारका व्लगहरु पढेर नै मैले यसबारे सिके । सुरुवातीमा लेखाइ चित्त बुझ्दैनथ्यो । धेरै पटक ब्लग खोल्दै, बन्द गरियो । आफ्नो गल्तीबाट आफैलाई सुधादै गए । अग्रज र साथीहरुको प्रतिक्रिया पाउन थालेपछि उत्साह थप्यो । र ब्लग नियमित गर्न थालियो ।
तपाईं कुन बिधामा ब्लगिङ गर्नु हुन्छ ?
आर्थिक समाचार, बिचारका साथै समसामयिक टिप्पणी, व्यक्तिगत भावना र यदाकदा साहित्य मेरा विषयबस्तु हुन् ।
एकैछिन तपाईंको ब्लगको लेखहरुको कुरा गरौँ । आफ्नो ब्लगमा के कस्ता बिषयबस्तु समाबेश गर्नुहुन्छ ?
सक्रिय आर्थिक पत्रकारिता गरिरहेकाले मेरो ब्लगिङको विषयबस्तु मुख्यतय आर्थिक विषयबस्तु नै हुनेगर्छ । आर्थिक समाचार र बिचार नै बढी मात्रामा लेख्ने गदर्छु । त्यसबाहेक मुड चलेका बेलामा आफ्ना भावना, टिप्पटी र यदाकदा साहित्यमा पनि कलम चलाउने गरेको छुँ ।
पछील्लो पटक कुन बिषयमा के लेख लेख्नुभयो ?
पछिल्लो पटक सहकारी क्षेत्रप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकको बेवास्ताबारे समाचार लेखेको थिए ।
के कुराले लेख्न अभिप्रेरित गर्यो ?
नेपालमा २३ हजारभन्दा धेरै सहकारीमा २ खर्ब भन्दा धेरैको कारोबार छ । तर देशको मौद्रिक नीति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यतातिर ध्यान नपुर्याउदा यस क्षेत्रमा विकृती बढेको छ । यसले आर्थिक दुर्घटनाको संकेत पनि गरेको छ । यसैलाई संकेत गर्न यो समाचार लेखेको थिए ।
यो लेखबाट कस्तो प्रतिकृया पाउनु भयो ?
सिनियर पत्रकार र नीति निर्माताबाट छाँयामा परेको कुरा उठाएको भन्नुभयो । सहकारीकर्मीले भने नकारात्मक पाटो मात्र हेरेको भन्दै सहकारीको सकारात्मक कुरा पनि केलाउन आग्रह गरे ।
आर्थिक समाचार र टिप्पणी धेरै हुने भएकाले यसप्रति रुचि हुनेहरुले मात्र हेर्नुहुन्छ। त्यसैले पाठकको संख्या ठिकै छ ।
ब्लगिङ गर्दाको कुनै रमाइलो वा सम्झनलायक अनुभव छ भने बताइदिनुस न ?
व्लगको समाचारमा हटाउन एक व्यक्तिले फोनमार्फत दवाव दिएका थिए । मैले हटाउन नमानेपछि उनले गुगललाई कम्प्लेन गरेर ब्लग नै बन्द गराइदिने धम्कि समेत दिएका थिए ।
नेपाली ब्लग क्षेत्रलाइ कसरी नियाल्नुभएको छ ? नेपालमा ब्लग क्षेत्रको भविष्य कस्तो छ ?
नेपालीहरुको प्रविधिमा पहुँच विस्तारै बढीरहेको छ । यसले प्रविधिमा आधारित विभिन्न विधा, सामाजिक संजालमा आवद्ध हुने र ब्लग गर्ने नेपालीको संख्या बढीरहेको छ । यसले नागरिक पत्रकारितालाई पनि विकास गरेको छ । हामीसँग संसारलाई पढाउने, देखाउने धेरै विषयबस्तु छन् । सबै विषयबस्तुसम्म आमसंचारको पहुँच नपुगेकाले ब्लगको महत्व अझ धेरै छ । यसको भविष्य पनि राम्रो छ । यसबाट व्यक्तित्व विकासका साथै समाज र देशका लागि केही योगदान गर्न सकिन्छ । आफ्नो सिजर्नात्मक क्षमतालाई तिखार्न र यसबाट आय आर्जन गर्न पनि सकिन्छ ।
ब्लग भनेको आफ्नो धारणा र अभिव्यक्ती स्वतन्त्र व्यक्त गर्न ठाउँ हो । हामीकहाँ केही युवा ब्लगरहरूले ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि बनाएका छन, तपाइलाइ के लाग्छ, ब्लगिङमा आचारसंहिताको जरुरी छ र किन ?
स्वतन्त्रताको अर्थ छाडा हुनु त हैन नि त्यसैले पनि ब्लगरहरु पनि आचारसंहिता बाँधिनु जरुरी छ । विषेशगरी अर्काको सिर्जना चोरेर आफ्नो ब्लगमा राख्ने, अरुलाई गाली गर्न, चरित्र हत्या गर्न पनि ब्लगको प्रयोग गरेको देखिन्छ । प्रहरीले पनि साइबर क्राइमबारे छुटै सेल गठन गरी कारवाही गर्न थालेको छ । यस अवस्थामा आचारसंहिताले ब्लगलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउछ ।
तपाईं सक्रीय पत्रकार हुनुहुन्छ । नेपालमा पत्रकारिता कत्तिको सजिलो छ ?
काम सबै चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । त्यसमा पनि जुनसुकै बेला काम गर्न तयार रहनुपर्ने, विकृति विसंगतिविरुद्ध कलम चलाउनुपर्ने पेशा अझ बढी चुनौतिपूर्ण नै छ । पूर्ण व्यवसायिक भइनसकेको र सामाजिक सुरक्षा नभएको स्थितिमा पत्रकारिता गर्न गाह्रो छ । तर यसप्रति गहिरो रुचि भएको र अध्ययन गरेकाको लागि भने केही सहज हुन्छ ।
एउटा पत्रकारको नाताले भन्नु पर्दा नेपाली पत्रकारहरुले अहिले कस्ता–कस्ता चुनौतिहरु भोग्नुपरेको छ ?
पत्रकारिता क्षेत्र व्यवसायिक बन्न नसक्नु अहिलेको प्रमुख समस्या हो । पेशागत र सामाजिक सुरक्षा नहुदा क्षमतावान धेरै पत्रकार पेशाबाट पलायन भएका छन् । राजनीतिक छाँयाले पनि यो क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ । यो पार्टीको पत्रिका भनेर तोक्ने गरिन्छ । केही संचारमाध्यमले गैरव्यवसायीक कृयाकलाप गर्दा पत्रकारिता क्षेत्र नै बदनाम भएको छ । पत्रकारिताप्रति समाजले दिएको सम्मान गिर्दै गएको छ । यसप्रति समयमै सरकार र पत्रकारका संघसंगठनले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
मुलधार पत्रकारिता र ब्लगिङमा के फरक छ ?
मुलधारको पत्रकारिता भन्दा ब्लगिङ स्वतन्त्र छ । जहाँ एक व्यक्ति नै लेखक, सम्मादक, प्रकाशक हुन्छ । यस अर्थमा त्यहाँ एक व्यक्तिको मात्र सोचाइ हुन्छ । तर मुलधारको पत्रकारितामा प्रकाशित हुनेबेलासम्म लेखकिय मर्म मरिसकेको पनि हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा मुलधारको पत्रकारिता राज्यले मान्यता दिएको र कानुनमा बाँधिएको हुनाले ब्लग भन्दा बढी विश्वसनिय हुन्छ ।
यो सकारात्मक काम हो । यसमा सहभागिता बढाउन प्रचारप्रसार गर्नुका साथै लेखन बढाउन विविध विषयमा लेखन क्याम्पेन चलाउन आवश्यक छ ।
लेखन क्षमता बढाउने समाग्रीहरु मेरो रिपोर्टमा एकदम कम छन् । विज्ञहरुको यससम्बन्धी सामाग्री बढाउनुपर्छ । नेपाली ब्लगरहरुको क्षमता र नागरिक पत्रकारिताको विकासका लागि अनलाईन वा प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न तालिम, कार्यशाला गर्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ ।
इमेल : j.yadav2006@gmail.com
Comment by yadav humagain on January 6, 2015 at 6:30pm
Comment by Shaku Limbu on January 30, 2012 at 5:51am
Comment by ram prasad kharel on January 29, 2012 at 10:07pm
la badhai6hajur
Comment by Kranti Darai on January 28, 2012 at 12:18am